China LH Ovulation Test Strip fekitori nevatengesi | ZVINOKOSHA
Imwe Nhanho LH Ovulation Bvunzo ndeyekuita-yega immunochromatographic nhanho imwe yekuyedza yakagadzirirwa in vitro hunhu kugadziriswa kwevanhu Luteinizing mahormone (hLH) mune weti kufanotaura nguva yeovulation.
Imwe Nhanho LH Ovulation Bvunzo yemhando yepamusoro, mbiri antibody sangweji immunoassay yekumisikidza kwevanhu Luteinizing mahormone (hLH) mune weti. Iyo membrane yaive pre-yakavharwa neanti-α hLH munzvimbo yekuyedza mutsara uye mbudzi inopesana negonzo IgG polyclonal antibody mudunhu rekutonga nharaunda. Munguva yekuyedza, weti yemurwere inobvumidzwa kuita neye colj conjugate (mbeva anti-β hLH monoclonal antibody-colloid yegoridhe conjugate) iyo yaive yakaomeswa-patest bvunzo. Iko kusanganiswa kunozoenda kumusoro pamusoro peiyo membrane chromatographically neye capillary chiito. Iri rekutonga bhendi rinoshanda sereferenzi yemavara akasimba angangoita 25mIU / ml LH.
Imwe LH Ovulation bvunzo tambo pane foil homwe.
Zvisungo: Chiyero chekuyedza chinosanganisira colloidal goridhe yakaputirwa ne1.5mg / ml antibody antibody
mbeva 1mg / ml mbeva anti α LH antibody uye 4mg / ml mbeva anti-LH antibody.
1.One Rimwe Nhanho LH Ovulation Bvunzo tambo
1.One Rimwe Nhanho LH Ovulation Bvunzo foil homwe
Chigadzirwa Chigadzirwa Imwe Nhanho LH Urine Ovulation Bvunzo
Kavha 1/2/5/25/50 / 100pcs / bhokisi
KUZIVISA ZUVA ROKUEDZA
Sezvo isu tichiziva, iyo yepamusoro yeLH yevasungwa ichauya pamberi peiyo ovulation .Iyo ovulation yemazai ine hukama hwepedyo neiyo yepamusoro yeLH kuburitswa munguva yekuenda kumwedzi. LH yepamusoro inofungidzira ovulates mune anouya 24-48 maawa. Naizvozvo, kuyedza kutaridzika kweLH yepamusoro panguva yekuenda kumwedzi kunogona kuvimbisa nguva yakanakisa yekusangana.
Saka kuti uone nguva yekutangisa kuyedza, iwe unofanirwa kutanga waziva kureba kwekuenda kwako kumwedzi.
Ongorora: kana usina chokwadi nezvehurefu hwako, unogona kutanga kuita bvunzo iyi kwemazuva gumi nerimwe mushure mekutanga nguva yako, imwe yezuva rega rega woimisa kusvikira iyo LH surge yaonekwa.
Pashure: LH Ovulation Bvunzo Pakati Pakati
Zvadaro: Dengue Rapid Bvunzo Kit
1) Bvisa tambo yekuyedza kubva muhomwe yefilosi
3). Verenga mhedzisiro pamaminitsi gumi.
Usadudzira Mhedzisiro PASHURE Maminetsi gumi.
Negative: Chete mutsetse wepingi unowanikwa mudunhu rekutonga (C) .kana ese ari maviri mitsara iri mudunhu rekutonga uye nzvimbo yekuyedza inoonekwa, asi iyo tambo yekuyera (T) iripo yakareruka kupfuura iyo yeiyo tambo yekudzora (C) mu Ruvara rwakasimba. Izvi zvinoratidza kuti hapana kuwedzera kweLH kwakawanikwa uye unofanirwa kuenderera kuyedza kwemazuva ese.
Zvakanaka: Mitsara miviri yepinki yakasarudzika inoonekwa, imwe iri munharaunda yekuyedza (T), uye imwe iri mudunhu rekutonga (C), iyo tambo yekuyera (T) yakaenzana kana kuti yakasviba kupfuura iyo tambo yekudzora (C) muhukuru hwevara. Ipapo iwe ungangove wovhura mumaawa anotevera 24-48. Uye kana iwe uchida kuve nepamuviri, iyo yakanyanya kunaka nguva yekuita bonde ndeye mushure me24hours asi pamberi pe48 maawa.
Hazvishande: Kana pasina mitsara yepingi-yepepuru inoonekwa ese mudunhu rekuyedza (T) uye inodzora dunhu (C), kana kuti pane mutsetse wepinki-wepepuru muyedzo mudunhu (T), asi hapana mutsetse mudunhu rekutonga ( C), bvunzo haishande. Zvinokurudzirwa kuti bvunzo inofanira kudzokororwa mune ino kesi.